लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चहर्‍याइरहने घाउः वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा - लोकसंवाद
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चहर्‍याइरहने घाउः वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा
काठमाडौँ । भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरुपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चहर्‍याइरहने घाउ बन्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झण्डै सात दशक हुन लाग्यो ।
बुधबार नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजक शैली तथ्यभन्दा बाहिरको छ । पटक पटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको भारतले सार्वभौमसत्ताको विषय ल्याउँदा आफूले अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरे/नगरेको बारेमा भने केही बताएको छैन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मे १५ मा नेपालसँग सोध्दै नसोधी नेपालको भूमि हुँदै दुई देशबीच वाणिज्य तथा व्यापार अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने भन्दै गठन गरिएको इमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप (इपिजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारत तयार देखिएको छैन । नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न र त्यसको अन्तरवस्तुमा रहेर समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रको जनगणनामा खटिनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै सिमाना हो भन्ने सबुद प्रमाण रहेको बताउनुहुन्छ । लिपुलेक कालापानीबाट बग्ने नदीलाई कृत्रिम काली बनाएर भारतले अतिक्रमण गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिपछि आधिकारिक पत्रमा पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा ओगट्ने सम्पूर्ण भूभाग व्यास प्रगन्ना (हालको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने) क्षेत्र नेपालको भएकाले तिरो–तिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु भनी इष्ट इन्डियाका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौँस्थित उसका रेजिडेन्टलाई पत्र लेखेको उल्लेख छ ।
भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा ३८५ ९कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । उसले सन् १९५० ताकबाटै सानो सैन्य चौकी कालापानीमा राखेको अनुमान गरिए पनि ठोस प्रमाण भने छैन । सन् १९५२ बाटै भारतले कालापानी अतिक्रमण थालेको थियो ।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा १७ स्थानमा सेनाको चौकी राखिएको सीमाविद्को भनाइ छ । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १५ वटा चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्करको चौकी कालापानीमा गएर बसेको विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालले पनि विसं २०२९ देखि २०३१ सम्म कालापानीमा भारतीयको गतिविधि नियाल्न दार्चुलाको तिङ्करमा प्रहरी चौकी निर्माण गरेको थियो । बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका–४ का वीरबहादुर चन्दका अनुसार शुरुमा १५ जना सुरक्षाकर्मी भए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमा अतिक्रमण भएको हो । भारतले मिचेको ठाउँको कर तिरेको मोठ बैतडीको मालपोतमा अहिले पनि रहेको बताइन्छ । चन्दका अनुसार पहिले दार्चुला जिल्लाको मालपोत पहिले बैतडी मालपोतमा बुझाइन्थ्यो । शुरुमा राखिएको चेक पोष्टलाई व्यवस्थित बनाएर सुरक्षाकर्मी थप्दै जानुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको हो ।
नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशीरुपमा भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता भएपछि भने विवाद थप बल्झिएको थियो । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले तत्कालै कूटनीतिक नोटसमेत दुवै देशलाई पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सरकारले आफ्नो सिमानाको विषयमा गम्भीर कदम चाल्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको सीमाविद्को भनाइ छ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने विषयमा सन् १८१६ देखि १९९३ सम्मको नक्साले प्रष्ट पार्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उल्लेख गर्नुहुन्छ । सो क्षेत्रमा भारतले एसएसवीसहित इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरी दैनिक हेलिकप्टर गस्ती गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत नहुनु भने विडम्बना हो ।
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं १ त्रिदेशीय सीमानाका हो । यहाँको तिङ्कर, छाङ्रु, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका (कुटी, गुञ्जी, नावी) नेपालको हो । नेपालसँग अहिले तिङ्कर र छाङ्रुमात्रै छ । सन् १९६२ पछि अरु सबै भारतीयको अतिक्रमणमा रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल बताउनुहुन्छ । त्यसैले हालको सबैभन्दा बढी पेचिलो विवादित ठाउँ बन्न पुगेको छ ।
दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतको एसएसवी बल र इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ छ । सीमा क्षेत्रमा उनीहरुको चहलपहल बाक्लो छ । फोर्सका हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम आसपास भएर महाकाली नदी किनारैकिनार दैनिक ८÷१० पटकभन्दा बढी ओहोरदोहोर गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीलाई जहाज र हेलिकप्टरले हवाई प्रदूषणसमेत गराउँदै आएको छ । उसले त्यहाँको सडक निर्माण सामग्रीसमेत हवाईमार्गबाटै लाने गरेको दार्चुलाका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
मुख्यगरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छाङ्रुबाट १० किलोमिटर पर गुञ्जी दोभान हो । त्यो दोभानमा लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी र लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आएको लिपु खोला मिसिन्छ । त्यही लिपुखोला ९कालापानी नजिकको मूल० लाई काली नाम दिएर भारतले त्यसबीचको समग्र भूभागलाई अतिक्रमण गरेको हो । यद्यपि तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी नै सिमाना हो भन्ने कुरा सुगौलीसन्धि पछिको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ । यसअघि सरकारको दरियो प्रयास हुन नसक्दा समस्या बल्झिएको स्थानीयवासी जितबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।
सरकारले हालै लिपुलेक कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको केहीअघि वैशाख ३१ गते सरकारले यहाँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) स्थापना गरेको छ । सो क्षेत्रमा सशस्त्रको गुल्मकै रुमपा विकास गर्ने गरी काम थालिएको छ । हालसालै सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णय ऐतिहासिक भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यहाँ २१ जना प्रहरीलाई पुर्‍याएर चौकी पनि पुनःस्थापन गरिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ ।
सीमा जोगाउन यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा तैनाथ नगरेसम्म नेपालको शिर उँचो हुँदैन । त्यसका लागि हाल विवादित बन्न पुगेको नेपाली भूभागमा भारतको सुरक्षा फौज रहेकाले एकैपटकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पुर्‍याउन कठिन छ । कूटनीतिकरुपमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुरक्षा विज्ञ तथा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा. डा. इन्द्रजित राई सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको निगरानी बढाउनु महत्वपूर्ण कदम हो भन्नुहुन्छ । पुरानो सीमा विवाद भएकाले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । अहिलेसम्म छाङ्रुसहित १२१ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना भएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतको ५३० चौकी छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि सीमानाकाका धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पुर्‍याउनु जरुरी छ । गत वर्ष मङ्सिर २३ मा सरकारले ११४ विओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा विओपीमात्रै थपिनुले पनि सरकारको प्राथमिकता कमजोर रहेको तथ्यले देखाउँछ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने विओपीको सङ्ख्या भारतको बराबर ५३० बनाउने गरी प्रक्रिया शुरु भएको बताउनुभएको छ । यसका लागि हाल कायम रहेको सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दीमा नौ हजार सशस्त्र प्रहरी आवश्यक पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक जनशक्तिसहितको योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । अहिले औषत १७ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको चौकी छ । यसको दूरी घटाएर एक/ दुई किलोमिटरमा झार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
सीमाका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधार इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा हुन् । उहाँका अनुसार कालीनदीको दक्षिणी भागमा गोग्रा अमर लेखिएको छ । नक्साको बीचमा महाकालीलाई ‘काली आर अर बेस्टर्न ब्रान्च अफ द गोग्रा अफ सर्जु’ लेखिएको छ भने सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई काली आर भनिएको छ । यी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले बुधबार नक्सा प्रकाशित गरेपछि विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ ‘फलाम तातेको बेला नै ठोक्नुपर्छ ।’ यसै भनाइअनुरुप नेपाल सरकारले आफ्ना कूटनीतिक तथा राजनीतिक प्रयासलाई अहिले नै दु्रत बनाउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो भूमिबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन कुनै पनि अर्थमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा आमनेपालीको मत छ ।
रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गाना/रासस